यिनै हुन् दुई दिदिबहिनि जसलाई तीज काल बनेर आयो – Butwal 24 News
September 2, 2021 Butwal 24 NewsLeaveaComment on यिनै हुन् दुई दिदिबहिनि जसलाई तीज काल बनेर आयो
काठमाडौं । दुई महिना पुग्नै लाग्दा पनि पुल निर्माणको काम कत्ति पनि अघि बढेन । फलस्वरुप बुधबार राति निकै दुःखद घटना भयो । दाङमा सिस्नेखोलामा आएको बाढीले जीप बगाउँदा चारजनाको मृत्यु भएको छ । घोराही-लमही सडक खण्डको घोराही उपमहानगरपालिका–४ स्थित सिस्नेखोलामा आएको बाढीले बुधबार राति १० बजे जीप बगाउँदा ४ जनाको ज्यान गएको हो । मृत्यु हुनेमा एकै घरमा दुई दिदीबहिनीसहित चारजना रहेका हुन् ।
त्यो दिन खोला ठूलो आएको थियो । ठूला सवारीसाधनहरू आवतजावत गर्न सक्ने भए पनि साना सवारीसाधनहरू आवतजावत गर्न सक्ने अनस्था थिएन । अन्ततः कार पनि बग्यो । चालक हाम फालेर बाँच्न सफल भए । तर, अन्य चार महिलाको मृत्यु भयो । मृत्यु हुनेमा दुईजना एकै घरका हुन् ।
घोराही उपमहानगरपालिका– १३ निवासी ३२ वर्षीया सुशीला श्रेष्ठ र घोराही– १४ निवासी ३० वर्षीया राधा श्रेष्ठ दुई बहिनी हुन् । उनीहरू घोराही उपमहानगरपालिका– १६ का वडा सदस्य जगत श्रेष्ठका छोरीहरू हुन् । उनका दुईजना मात्रै छोरी थिए । उनीहरू दुवैजनाको बिहे भइसकेको थियो । जेठी छोरी सुशीलाका सन्तान छैनन्, तर कान्छी छोरी राधाको १२ वर्षको एउटा छोरा छन ।
मन्त्रीको आश्वासन पाएकाहरु को को हिस्स ?
माछा मार्ने माझी एकैदिनमा यसरी बने करोडपति !
एसईई नतिजा प्रकाशित, यसरी हेर्न सकिन्छ नतिजा